Antony 3 hanitarana ny tratry ny varotra amin'ny horonan-tsary | Martech Zone
Ny horonan-tsary dia iray amin'ireo fitaovana marketing matanjaka indrindra amin'ny arsenalinao mba hanitarana ny tratry ny varotra, nefa matetika no tsy jerena, tsy ampiasaina firy ary / na tsy takatra.
Tsy misy resaka hoe mampatahotra ny famokarana atiny horonantsary. Mety ho lafo ny fitaovana; ny fizotry ny fanovana mandany fotoana be, ary ny fahitana fahatokisana eo imason'ny fakan-tsary dia tsy mora foana. Soa ihany isika fa be dia be ny safidy azontsika atao anio hanampiana antsika handresy ireo olana ireo. Ny finday avo lenta indrindra dia manolotra horonantsary 4K, ny rindrambaiko fanovana dia nanjary mora azo sy mora ampiasaina kokoa, ary azonao atao ny mampihatra ny fahaizanao amin'ny fakan-tsary amin'ny tambajotra sosialy toa ny Facebook Live, Snapchat, ary Periscope.
Tena mendrika tokoa ve ny mametraka fotoana handresena ireo fanamby ireo, ary amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny horonan-tsary manampy amin'ny fanitarana ny tratry ny varotrao?
Mpampiasa finday tena tia sy mizara doka horonantsary!
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny zavatra tadiavin'izy ireo ny mpanjifa maoderina dia ny manatratra smartphone iray hahazoana izay ilaina. Fikarohana nataon'i Google mampiseho fa ireo mpampiasa finday avo lenta izay mijery horonantsary amin'ny fitaovany dia 1.4x kokoa no mijery dokam-barotra avy eo amin'ireo eo amin'ny birao birao, ary mety 1.8x aza no mizara azy ireo.
Google dia tia horonantsary!
Ny atiny dia 53x mety kokoa hiseho voalohany amin'ny pejin'ny valin'ny motera Google raha manana horonan-tsary tafiditra ao amin'ny pejin-tranonkalanao ianao. Izany angamba no antony Cicsco dia maminany Ity horonan-tsary ity dia hahatratra 69% ny fivezivezena amin'ny Internet ho an'ny mpanjifa amin'ny 2017.
Ny Video dia mamadika ny vinavina ho mpanjifa bebe kokoa!
Horonantsary tsotra amin'ny pejy fipetrahana dia afaka hampitombo ny fiovam-po amin'ny 80%. Raha mampiasa horonan-tsary amin'ny mailaka ianao dia azonao atao ny mampiakatra hatramin'ny 300% ny tahan'ny fiovam-ponao. Ary ny B2B? 50% ny mpitantana mitady fampahalalana bebe kokoa aorian'ny fahitana vokatra / serivisy ao anaty horonan-tsary, 65% mitsidika ny tranonkala, ary 39% manao antso.
Afaka nanohy aho, fa amin'izao fotoana izao ireo antony tsotra 3 ireo dia tokony ho ampy hampientanentana anao amin'ny fomba ahafahanao manitatra ny fivezivezena amin'ny vidéo. Hijery ny atiny anao tokoa ny prospect, hataon'i Google laharam-pahamehana ny atiny ary ny video dia hamadika ny atiny ho lasa dolara.
Tags: Lahatsary Marketingvideo marketingtombony amin'ny marketing amin'ny horonan-tsary
Harrison ny VP an'ny fampandrosoana orinasa DK New Media. Mpandraharaha serial izy ary mpivarotra famoronana izay nahazo ny orinasam-barotra roa, ny iray manokana ary ny iray ampahibemaso. Harrison koa dia mpilalao horonantsary sy talen'ny horonantsary za-draharaha, mitondra an'io fahaiza-manao io ho eo anelanelan'ny serivisy votoatin'ny premium hafa. Ny fitiavany dia ny fananganana fifandraisana sy ny fikatsahana fiaraha-miasa mamorona izay mifantoka amin'ny herin'ny fiaraha-miasa, ny fanavaozana ary ny fikorontanan'ny tsena.
Ireo masoivoho tsy ampy dia milaza amin'ny prospect mba handeha an-tongotra
Malvertising: Inona no dikan'izany amin'ny fampielezana nomerika ataonao?
Dec 21, 2016 amin'ny 9: 56 AM
Salama Harrison, miombon-kevitra aminao aho.
Ny horonantsary no atiny gen manaraka. Afaka manome traikefa ho an'ny mpampiasa tsara kokoa ny horonantsary raha oharina amin'ireo safidy hafa rehetra. Vao haingana aho no tonga niampita lahatsoratra iray izay nanasongadina ny maha-zava-dehibe ireo horonan-tsary amin'ny fanamafisana ny fiovam-po. Ny mpanoratra Forbes Jayson DeMers dia nilaza tao amin'ny iray tamin'ny lahatsorany fa ny ho avy dia ny atiny video. Ny fanadihadiana iray notontosain'ny Cisco dia naminavina ihany koa fa, amin'ny taona 2018, ny 79% -n'ny fifamoivoizana amin'ny Internet dia ho avy amin'ny doka video. Ho an'ny ref, Chick ity lahatsoratra ity izay manondro ny maha-zava-dehibe ny horonan-tsary http://www.kamkash.com/top-8-online-marketing-strategies/